"सुबारु वनपाल": प्राविधिक विनिर्देशों र एसयूवी को नयाँ पुस्ता को डिजाइन
पछिल्लो गिरावट, लस एन्जलस एक अमेरिकी स्वतः शो को भाग रूपमा सार्वजनिक गर्न सबै दुनिया एसयूवी "सुबारु वनपाल" भन्दा चिरपरिचित को एक नयाँ चौथो पुस्ता प्रस्तुत गरियो। विनिर्देशों र डिजाइन नयाँ वस्तुहरू, विकासकर्ताहरूले अनुसार, धेरै परिवर्तनहरू भइरहेको छ। खैर, घरेलू बजार बिक्री मा आधिकारिक प्रीमियर अघि2सप्ताह सुरु। त्यो निर्माता नयाँ उत्पादन बारे सबै विस्तृत जानकारी भने, त्यसैले हामी जापानी क्रसओभर को छुट्टै समीक्षा समर्पित गर्न पर्याप्त जानकारी छैन।
बाहिर, कार धेरै परिवर्तन भएको छैन। हामी अघिल्लो यसलाई तुलना भने, बन्द-सडक को तेस्रो पुस्ता, तपाईंले केही मतभेद नोटिस हुनेछ। मुख्य रूप चिन्तित प्रकाश, निर्माण अपडेट गर्ने जंगला को र बम्पर आकार। साथै, निर्माता डिजाइन rims परिवर्तन भयो। नयाँ पुस्ता को उत्पादन सामान्य restyling (कार को बाहिरी आंशिक मात्र परिवर्तन भएको बेला) संग तुलना गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ उत्पादन बाँकी, एउटै रह्यो।
आकार र क्षमता
यो कार को शरीर थोडा आकार मा थपियो कि उल्लेख गर्नुपर्छ। को नाङ्गो आँखा यसलाई नोटिस धेरै गाह्रो छ, तर अझै पनि परिवर्तन छन्। यसरी, 459,5 सेन्टिमिटर को एसयूवी लम्बाइ चौडाइ - लगभग 180 सेन्टिमिटर, एक उचाइ - 173,5 सेन्टिमिटर। र wheelbase वृद्धि। अब, आफ्नो लम्बाइ 264 सेमी छ। यसलाई5मिलिमिटरमा अवकास (अब जमीन मा थपिएको थियो अवकास 22 सेमी को)। कारण यी परिवर्तनहरू गर्न ईन्जिनियरहरु सामान ठाउँ वृद्धि गर्न सक्षम थिए। अब त्यहाँ सामान को 488 लिटर सेट अप गर्न सकिन्छ।
"सुबारु वनपाल": प्राविधिक विनिर्देशों
रूसी खरीदारों तीन powertrains को एक विकल्प प्रस्ताव गरिनेछ। तिनीहरूलाई बीच, जूनियर 150 "घोडाहरू" को एक उत्पादन छ, र यसको काम मात्रा 2-एम लिटर बराबर छ। अर्को इन्जिन "सुबारु वनपाल" तुरुन्तै फेला परेन, तर आधिकारिक debut पछि मात्र छ महिना। जब 2.5 लिटर यसको काम मात्रा यो 171 अश्वशक्ति को एक उत्पादन भएको छ। यो इन्जिन अब नयाँ एसयूवी "सुबारु वनपाल" को आधारभूत खरीदारों मा उपलब्ध हुनेछ। यो इन्जिन 241 अश्वशक्ति को एक उत्पादन छ किनभने वरिष्ठ एकाइहरूको प्राविधिक विशेषताहरु, सबै भन्दा उन्नत छन्।2लिटर - सोही, आफ्नो काम मात्रा आधार मोटर को कि जस्तै हो। यस्तो शक्ति, विकासकर्ताहरूले अनुसार, turbocharging मार्फत हासिल गरिएको छ। तसर्थ, मिसिन यसको इन्धन खपत अघिल्लो स्तरमा रहिरहन्छ गर्दा, थप गतिशील र गति ढल्छ हुनेछ।
नयाँ "सुबारु वनपाल" को मूल्य
प्राविधिक विशेषताहरु हामी पहिले नै विचार, अब लागत मा सार्न।4पुस्तालाई मूल्य जापानी एसयूवी को 1,149 करोड rubles को एक चिन्ह सुरु हुनेछ। "माथि" उपकरण लायक लगभग 1 लाख 695 हजार rubles। फेला स्पेयर पार्ट्स संग समस्या "सुबारु वनपाल" कार मालिक हुनेछ भनेर छैन नयाँ उत्पादन, आधिकारिक रूस मा उपलब्ध हुनेछ। स्पेयर पार्ट्स हरेक शहर मा पाउन सकिन्छ, र कुनै पनि डीलरशिप सेवा स्टेशन मा विस्तार परिवर्तन।
एसयूवी 'Prado 150 ": मिलाउने, कन्फिगरेसन। टोयोटा ल्याण्ड क्रूजर Prado 150
बेन्टले Bentayga 2016 मा रेकर्ड तोड्न कम्पनी मदत गर्नेछ?
विश्वसनीय र सस्तो jeeps: एक अवलोकन, उत्पादकहरु को बारेमा प्रतियोगिहरु को एक तुलना र प्रतिक्रिया
"लीफान एक्स 80": तस्बिर, समीक्षा, विनिर्देशों
दुई सिनेमा - reunification को संभावना
रोटी निर्माता एलजी: स्वादिष्ट रोटी बिनै!
Hotel Orient Palace 5, Sousse, Tunisia। आरक्षण, मूल्यहरू, फोटो।
मधुमेह बाट बाख्रा गरेको Rue जडिबुटी: तस्बिर, अनुप्रयोगको सुविधाहरू
डिफेन्डर CSKA हकी क्लब Nikita Pivtsakin
फूल लागि खडा। stylistic समाधान को विभिन्न